Atrikasa izay nanomboka ny alarobia teo. Anton’izao atrikasa izao, hoy ny filohan’ny federasionin’ny tranoben’ny varotra sy ny indostria, Viviane Dewa Zafinandro, ny mba hamerenana indray ny satan’izay rafitra izay sy ny tanjany eo amin’ny sehatry ny fanondranana ireo vokatra maro isan-karazany misy eto Madagasikara. Antenimieran’ny varotra avy amin’ny faritra maro manerana ny nosy no miatrika ity atrikasa ity, ankoatra ireo mpanondrana ny entana any ivelany. Andrasana anio, araka izany, ny tsoa-kevitra mandritra ity atrikasa ity. Heverin’ny Filohan’ny tranoben’ ny varotra Atsinanana vaovao vao nandray ny asany ny 4 febroary teo, Dahy Leonard, fa tombondahiny ho an’ny tranoben’ny varotra ao an-toerana izao fifampizarana traikefa izao. Olana mantsy, hoy izy, ny tsy fahatomombanan’ny resaka kalitaon’ ny vokatra ahondran’i Madagasikara eo amin’ny tsena iraisampirenena ka tokony ho vain-dohan-draharaha, noho izany, izay fiarovana mafy ny kalitao izay mba tsy ho fatiantoka sy henatry ny firenena. Raha ho an’ny antenimiera ny varotra ao Toamasina manokana dia Nifarana ny volana Janoary teo ny fe-potoana voalohany nitantanan’ny filoha teo aloha. Fe-potoana izay miova isaky ny roa taona , mandritra ny efatra taona, hoy ny fanazavana. Tanjon’ny filoha vaovao, hoy izy, ny hamerina indray ny lazan’ny antenimieran’ ny varotra ao Toamasina fa eo ihany koa ny fanaraha-maso ireo mpandraharaha eo amin’ny fanafarana entana avy any ivelany miditra eto Madagasikara .